ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -32 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -31
ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 33 →
Posted on August 3, 2011 by chitnge
သစ္စာဝါဒီ ပီသသူတို့အတွက် သတိပေးချက်များ
(ဃ) အကောင်းဆုံးသော သည်းခံခြင်း
သည်းခံလျှင် နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ဆိုသော စကားရှိသည်။
သည်းခံသည်ဆိုရာ၌ မိမိ၏ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟများကို သည်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ အဇ္ဈတ္တ ဘ၀င်တွင် လောဘတရား ဖြစ်ပေါ်လာချင်ပါလျှင် ထိုလောဘတရားကို သည်းခံနိုင်ရမည်။ လောဘစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း အလိုမလိုက်ဘဲ သည်းခံနိုင်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဒေါသတရား၊ မောဟတရားများသည်လည်း ထို့အတူပင် ၎င်းတို့ကို အလိုမလိုက်ဘဲ သည်းခံရမည်သာ ဖြစ်သည်။
သူတော်ကောင်းများသည် သူတော်မှ ကိုယ်ကောင်းသည်ဟု ဆိုရိုးစကားရှိကြသည်။ ပြင်ပလောက၏ မတရား စော်ကားမှုများကို သည်းခံရာ၌ နှစ်မျိုး နှစ်စားရှိသည်။ ပထမ အမျိုးအစားမှာ စော်ကားချင်သလို စိတ်တိုင်းကျ စော်ကားခွင့်ပေး၍ သည်းခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယ အမျိုးအစားမှာ စော်ကားမှုများကို သည်းမခံနိုင်၍ မဟုတ်သော်လည်း စော်ကားသူများအား ပညာပေးသော အနေနှင့် သည်းမခံဘဲ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက် ရာရာတို့ကို အကြောင်းအကျိုး ရှင်းလင်းဆုံးမ ညွှန်ကြားပြသသည်။ မဖြစ်သင့်သည်တို့ကို နောင်မဖြစ်ရအောင် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ဆုံးမသွန်သင် ဟောပြောရသည်။
ဤနေရာတွင် ခွင့်မလွှတ်နိုင်၍ တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါသော်လည်း သိပါစေ၊ တတ်ပါစေ၊ နားလည်ပါစေ ဟူသောသဘောနှင့် အကြောင်းအကျိုး ရှင်းလင်းဖော်ပြ ဆုံးမခြင်းတို့သည် အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်၊ သည်းမခံနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သစ္စာဝါဒီ မပီသကြပါ။ ခွင့်လွှတ်နိုင်၍ ဆိတ်ဆိတ်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆုံးမရန် တာဝန်မရှိကြပါ။ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါ သော်လည်း၊ သည်းခံနိုင်ပါသော်လည်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း သည်းခံခြင်းပြုပြီးမှ အကျိုးအကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆုံးမရန် တာဝန်ရှိသော တရားရှင်များပင် ဖြစ်ကြပါသည်။
အထက်ပါ ၃ မျိုး ၃ စားအနက်မှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆုံးမရန် တာဝန်ရှိသော အမျိုးအစားများသည်ပင် လိုအပ်သောအခါ ဆိတ်ဆိတ်နေလျှက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဥပေက္ခာပြု လစ်လျူရှုကြသည်။ လစ်လျူရှုခြင်း ဥပေက္ခာပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော သည်းခံမှု တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တရားရှင်ဆိုသည်မှာ မေတ္တာရှင် ဖြစ်ရသည်ဖြစ်၍ မိမိကို စော်ကားနေသူကိုပင် မေတ္တာဖြန့်ဝေ ပို့သနိုင်ရပါသည်။
လောကကြီးသည် မိမိအတွက် မလိုလားအပ်ရာ မကျေနပ်စရာများချည်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာသည် ထားဦး ထိုလောကကြီးအပေါ် အထူးမေတ္တာ ပို့သလျှက် အနတ္တဉာဏ်ကို ခန္ဓာပေါ် နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နိုင်ရမည်။ ဤကျင့်စဉ်မှာ တရားရှင်တို့အတွက် လက်တွေ့ကျင့်စဉ် တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်နေပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် တရားရှင်တို့အတွက် သည်းခံခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ မေတ္တာဖြန့်ဝေခြင်းတို့သည် မလွဲမသွေ ကျင့်သုံးဆောက်တည် ရသော အကျင့်လမ်းစဉ် တရားများသာ ဖြစ်ပါသည်။
ထပ်မံ ဖွင့်ဆိုရပါသော် သာသနာတော်အား အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပြုနေသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် လူပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သာသနာ၏ မျက်နှာကိုထောက်ကာ အထူးသဖြင့် သည်းခံနိုင်ရခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်ရခြင်း၊ မေတ္တာဖြန့်ဝေနိုင်ရခြင်းများကို ခြေသုပ်ပုဆိုး မြွေစွယ်ကျိုးသို့ ဟူသော စကားတမျှပင် ကျင့်သုံးတည်ဆောက်ရပါသည်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, တရား, နိဗ္ဗာန်
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, တရား, နိဗ္ဗာန်. Bookmark the permalink.
Total Visitors : 7325
Today Visitors : 64